Natiijada Baaritaanka Qalbi Dhagax oo weli aan la shaacin! • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Natiijada Baaritaanka Qalbi Dhagax oo weli aan la shaacin!
Natiijada Baaritaanka Qalbi Dhagax oo weli aan la shaacin!
October 12, 2017 - By: Mohamed Jeenyo
Qalbidhagax iyo askar Itoobiyaan waadiye ka haya
Waxaa la joogaa labo maalin kadib xiligii la sheegay in la shaacin doono natiijada baaritaanka kiiskii Muwaadinkii (Qalbi Dhagax) oo ay dowlada Federaalka u gacan gelisay Itoobiya, waxaase weli lagu guuleysan in la shaaciyo waxa kasoo baxay baaritaankaasi oo ay wadeen Gudi ka socda Baarlamaanka Federaalka.
Gudigan loo saaray baaritaanka kiiskan ayaa ka danbeeyey kadib markii Xukuumada Federaalka ama Golaha Wasiirada ay shirkoodii 6dii bishii September ku adkeysteen dhiibista muwaadinkaasi iyadoo xukuumada Xasan Cali Khayre ay ku tilmaamtay jamhada ONLF mid argagaxiso ah oo la shaqeysa kooxda Al Shabaab.
Hadaba baaritaanka ay wadeen gudigan xildhibaanada ka kooban ayaa ahaa mid si hoose u socday oo aan saxaafada loo soo bandhigin, manacada illaa iyo hada waxa dib u dhaca ku keenay xiligii loo qabtay in la shaaciyo oo ahayd Salaasadii lasoo dhaafay ee 10ka bishan Oktoober.
Sidoo kale Raysalwasaaraha Xukuumada Xasan Cali Khayre oo la rumeysan yahay inuu kamid ahaa xubnihii lagu wargeliyey dhiibista sarkaalkaasi ONLF iyo golihiisa Wasiirada ay weli ku adkeysanayaan in ONLF ay tahay jamhad argagaxiso ah ayna ku saxsanaayeen dhiibista sarkaalkaasi.
Waxaa dhinaca kale jira su’aalo badan oo la iska weydiinayo sharciyada ama qaabka loo dhiibay ninkaasi ahaa muwaadin heysta dhalashada Soomaaliya, iyadoo aan gebi ahaan la marin xeerarkii ciqaabta ee dalka Soomaaliya.
Su’aalaha la isweydiinayo ayaa ah:
1- Qalbi dhagax miyuu danbi ka galay dalka iyo Qaranka Soomaaliya? Hadii jawaabtu HAA tahay, hadaba maxaa maxkamad loogu soo taagi waayey dalka Soomaaliya gudihiisa?
Hadii Jawaabtu MAYA tahay maxaa ku khasbay dowlada Soomaaliya inay muwaadinkaasi u gacan geliso dowlada Itoobiya oo horey hay’adaha caalamiga ee xaquuqul insaanka ugu eedeeyeen jirdilka iyo dilka ay u geysato maxaabiista aan maxkamada lasoo taagin?
Su’aalahaasi ayaa ah kuwo aan illaa iyo hada wax jawaabo ah loo heyn, isla markaana ku khasbay aamusnaanta dheeraatay ee madaxda sare ee dowlada Federaalka oo dhegaha ka xirtay Sheekada QALBI DHAGAX oo u muuqata inay tahay sheeko aan halkaasi ku ekaan doonin.